Kharashka saamiyada Microsoft Corporation
Saamiyada Microsoft Corporation maanta, qiimaha MSFT stock online hadda, wadaag qiimaha Microsoft Corporation.
Ku dar widgets
Waxaa lagu daraa widgets
Microsoft Corporation Sicirka saamiyada Jaantuska internetka Taariikhda kharashka Maalgalinta Qaybsashada Wanaag Dakhli Qiimeynta
MSFT = 260.65 US dollar
+8.09 USD (+3.1%)
Isbeddelka sicirka bedelka laga soo bilaabo shalay
Ku beddel Microsoft Corporation ee US dollar celcelis ahaan heerka hadda taagan. Macluumaadka ku saabsan isu beddelka Microsoft Corporation ee US dollar ayaa la cusbooneysiiyaa maalintiiba hal mar. Qiimaha saamiyada ee laga keenay ilo la xaqiijiyay. 1 saamiyada ah Microsoft Corporation hadda waxay la mid tahay 260.65 saamiga US dollar. Microsoft Corporation kor ayuu u kacaa. Heerka Microsoft Corporation sicirbararku wuxuu ka kordhay US dollar by 320 boqol meelood meel boqolkiiba dhibic
Microsoft Corporation qiimaha saamiga ee shirkadda US dollar
Usbuuc ka hor, Microsoft Corporation waa la iibsan karaa 266.82 US dollar. Sanad ka hor, Microsoft Corporation waxaa lagu iibin karaa 249.68 saamiga US dollar. Saddex sano ka hor, Microsoft Corporation waxaa lagu beddeli karaa 126.24 US dollar. Qiimaha saamiga Microsoft Corporation gudaha US dollar waxaa lagu arki karaa shaxda. -2.31% - isbeddel ku yimi qiimaha saamiga Microsoft Corporation ee US dollar usbuucii. Isbedelka sicirka saamiyada ee Microsoft Corporation gudaha US dollar muddo hal sano ah ayaa 4.39%.
Usbuucii Bisha 3 bilood Sannad 3 sano
Qodobbada saamiyada Microsoft Corporation US dollar
MSFT In US dollar (USD)
1 MSFT 260.65 US dollar
5 MSFT 1 303.25 US dollar
10 MSFT 2 606.50 US dollar
25 MSFT 6 516.25 US dollar
50 MSFT 13 032.50 US dollar
100 MSFT 26 065 US dollar
250 MSFT 65 162.50 US dollar
500 MSFT 130 325 US dollar
Maanta, 10 saamiyada of Microsoft Corporation waa lagu badali karaa 2 606.50 US dollar. Waad ku badali kartaa 25 saamiga Microsoft Corporation ee loogu talagalay 6 516.25 US dollar. Maanta, 50 saamiyada of Microsoft Corporation waa la iibin karaa 13 032.50 US dollar. Maanta 26 065 USD = 100 saamiga MSFT. Waad ku badali kartaa 65 162.50 US dollar oo loogu talagalay 250 saamiga Microsoft Corporation. Beddelashada 500 saamiyada of Qiimaha Microsoft Corporation 130 325 US dollar.
MSFT taariikhda qiimaha saamiyada
23/05/2022 260.65 USD 8.09 ↑
20/05/2022 252.56 USD -0.58 ↓
19/05/2022 253.14 USD -0.94 ↓
18/05/2022 254.08 USD -12.74 ↓
17/05/2022 266.82 USD -
Microsoft Corporation ee US dollar waxay hadda la mid tahay 260.65 US dollar ku yaal 23 May 2022. 20 May 2022, 1 saami ah oo ah Microsoft Corporation kharashyada 252.56 US dollar. 19 May 2022, 1 saami ah oo ah Microsoft Corporation kharashyada 253.14 US dollar. Ugu badnaan MSFT / Heerka USD heerka bishii ugu dambeysay ayaa ahaa 17/05/2022. Heerka ugu yar Microsoft Corporation ee US dollar heerka wuxuu ku jiray 20/05/2022.
Hal qayb oo ka mid ah Microsoft Corporation maanta waxay u taagan tahay 260.65 $. Qiimaha MSFT ayaa isbeddelay ilaa +3.1% ama +8.09 USD tan iyo maalintii ugu dambeysay ee ganacsiga. Waxaad ka iibsan kartaa 100 saamiyada Microsoft Corporation ah 26 065 US dollar ama iibin 50 saamiyada MSFT ee 13 032.50 US dollar.
Microsoft Corp waa shirkad tiknoolaji ah.Waxay horumarisaa, shatiga, iyo taageerida alaabooyin iyo adeegyo badan oo software ah.Ganacsigeeda waxaa loo abaabuley saddex qaybood: Waxsoosaarka iyo Hannaanka Ganacsiga, Cloud Intelligent, iyo Computing Personal More.
Lacagta Microsoft Corporation maanta, qiimaha kaydka MSFT waa hadda online.
Qiimaha MSFT online
Microsoft Corporation saamiyada dhabta ah ee waqtiga, MSFT qiimaha saamiga online, MSFT.
Microsoft Corporation taariikhda qiimaha saamiyada
Microsoft Corporation In US dollar shaxanka tan iyo bilowgii ganacsiga.
Microsoft Corporation awood wayn
Miisaanka ganacsiga ee MSFT saamigaan maanta iyo taariikhda weyn ee Microsoft Corporation.
Maaliyadda Microsoft Corporation
Dhibaatooyinka Microsoft Corporation
Taariikhaha bixinta saamiyada ee saamiyada MSFT, saadaasha bixinta saamiyada MSFT ee 2022.
Microsoft Corporation dakhli kasta oo wadaag ah
Dakhliga saddexda bilood ee shirkadda Microsoft Corporation, ka warbixi faa'iidada saamiyada saamiga MSFT ee 2022.
Dakhliga Microsoft Corporation
Ka warbixi natiijooyinka dhaqaale ee shirkadda Microsoft Corporation, dakhliga sanadlaha ee Microsoft Corporation ee 2022.
Qiimeynta shirkadda Microsoft Corporation
Microsoft Corporation ee ku jira liiska caalamka